Myanmar News Zone (မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း) - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
သတင်းများ	ဗွီဒီယိုများ	အတွေးအရေး	ဆွေးနွေးခန်း	အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နယူးယောက်မြို့နေ မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသားများ တွေ့ဆုံပွဲ
Parent Category: ရပ်ဝေးမြန်မာ	Category: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	Published: 06 September 2012	ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နယူးယောက်မြို့နေ မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၁၂ (စနေနေ့)
နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီမှ ၁၂း၀၀ နာရီ
Colden Center for the Performing Arts Queens College, The City University of New York 65-30 Kissena Blvd, Flushing, NY 11367
*အသေးစိပ်အစီအစဉ်များကို သိလိုပါက http://suu-nyc.blogspot.com/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မစိုးရိမ်သာသနဇောတိကကျောင်း အဌမအကြိမ် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်
Parent Category: ရပ်ဝေးမြန်မာ	Category: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	Published: 25 August 2012	မစိုးရိမ်သာသနဇောတိကကျောင်း အဌမအကြိမ် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်ကို ၂၀၁၂ ခု စက်တင်ဘာ (၉)ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘရွတ်ကလင်မြို့ရှိ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအသင်း မစိုးရိမ်သာသနဇောတိကကျောင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
နေ့။ ။ ၉-၉-၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
နေရာ။ ။ မစိုးရိမ်သာသနဇောတိကကျောင်း 2321 East 15th Street, Brooklyn, NY 11229 (718) 891-2565
အစီအစဉ်။ ။ (၁၁) နာရီမှ (၁၂)နာရီ - သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ် လှူဒါန်းပါမည်။ (၁၂) နာရီမှ (၂)နာရီ - ပျော်ပျော်ပါးပါးဈေးရောင်းပွဲကျင်းပပါမည်။ (၂) နာရီမှ (၃)နာရီ - မဟာဒုတ်မဲဖွင့်ပွဲ ကျင်းပပါမည်။ (၃) နာရီမှ (၄)နာရီ - ဆရာတော်အရှင်ပညာနန္ဒမှ နိဗ္ဗာန်ဈေးတရားဟောကြားပါမည်။
ပေါက်မဲများ - မဟာဒုတ်ဘုရားမဲ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ မဲတစ်စောင်လျှင် $5 နှုန်းဖြင့် ရောင်းချပါမည်။
နိဗ္ဗာန်ဈေးတွင်ရနိုင်သောအစားအသောက်များမုန့်ဟင်းခါး။ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ဒံပေါက်၊ စမူဆာ၊ ပုဇွန်ခွက်ကြော်၊ ဘူးသီးကြော် (ရှယ်အချဉ်ရည်)၊ ဗာလချောင်ကြော်၊ ရွှေမေတ္တာပုဇွန်ချဉ်၊ နှမ်းဖတ်ချဉ်၊ ရှမ်းမုံညှင်းချဉ်၊ ပဲပြုနှင့် အခြားသော မြန်မာ့စားသောက်ဖွယ်ရာများ။
နယူးဂျာစီ မဟာစည်သတိပဌာန်ရိပ်သာ (၈)ကြိမ်မြောက် နိဗ္ဗာန်ဈေးရောင်းပွဲ
Parent Category: ရပ်ဝေးမြန်မာ	Category: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	Published: 01 June 2012	(၈) ကြိမ်မြောက် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်ကို ၂၀၁၂-ခု ဇွန်လ(၁၀)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နယူးဂျာစီ မဟာစည်သတိပဌာန်ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နေ့စွဲ။ ။ ဇွန် ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်
အချိန်။ ။ နံနက် ၉း၀၀ - နေ့လည် ၂း၀၀
နေရာ။ ။ 63 Gordons Corner Road, Manalapan, NJ 07726 (Tel: 732-446-1552)
မိုးကြိုးစာနာထောက်ပံရေးအဖွဲ့မှ (၅)နှစ်မြောက် မြန်မာအစားအစာ ဈေးပွဲတော်
Parent Category: ရပ်ဝေးမြန်မာ	Category: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	Published: 18 May 2012	မိုးကြိုးစာနာထောက်ပံရေးအဖွဲ့မှ (၅)နှစ်မြောက် မြန်မာအစားစာဈေးပွဲတော်ကို Queens county Long island City ရှိ Aviation High School, 45-30 36th Street, Long Island City, NY 11101 တွင် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီမှ ညနေ ၄နာရီအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရိပါသည်။
Parent Category: ရပ်ဝေးမြန်မာ	Category: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု	Published: 06 October 2011	မိုးကြိုးရဲ့ မီးပုံမြိုင်မြိုင် တန်ဆောင်တိုင် Saturday, October 29, 2011, 7:00 PM
You are invited to join us foraunique celebration in Burmese tradition “The Festival of Lights.” We will be serving Traditional Burmese dinner buffet. The Celebration will continue with Chinlone (Burmese Woven Rattan Ball) performance and Classical Burmese Dance. This event isapeek into the unique culture that is Burma “Myanmar” the Golden Land. Moegyo Humanitarian Foundation provides to Myanmar what Andrew Carnegie described as “Real and permanent good”.
(Burmese Attire Welcome)
Ticket: $50 adults, $25 children 3-9 years old
Seating is limited. Get your tickets fast from:
Myat Moe Moe Min: 917-385-1595
Swe Mar Than: 917-502-4933
Win Min Htun: 347-552-7237
Chan Chan: 917-645-2814
ဓမ္မမိတ်ဆွေများအသင်း၊ မစိုးရိမ် သာသနဇောတိကကျောင်း (၁၃-ကြိမ်မြောက်) ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
INSTRUCTIONS FOR THE 2013 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM (DV-2013) Education Within Arms Reach
နယူးဂျာစီ - နိဗ္ဗာန်ဈေးတွင် ကုသိုလ်ရေးမို့ အားပေးကူညီ။ ရောင်းမည်၊ ဝယ်မည်၊ လှူဒါန်းမည်။
အိုင်ရင်း (Irene) မုန်တိုင်း၏ အကျိုးဆက်များ Start Prev 1234567 8910 Next End Page 1 of 13